Uhlu lwabahlinzeki be-SaaS kanye neBhajethi yabo Yokumaketha | Martech Zone
Uma ngihlangana nomuntu ovela eVital, ngizobagona le infographic. Sisanda kwabelana ngokuthunyelwe ku- isabelomali sokumaketha esifanele njengoba sibhekisa kumaphesenti wemali isiyonke, kepha lokhu kunikeza ukusetshenziswa kwemali okujule kakhulu kwesabelomali okusekela nokuqinisa enye i-infographic.
Eminyakeni embalwa eyedlule, besisebenza neSoftware njengomhlinzeki wesevisi embonini ye-Marketing Automation ebichitha imali engaphansi kwesabelomali saminyaka yonke samadijithi ayisithupha nathi ukusiza ukuqhuba isabelo sabo semakethe.
Senze inqubekela phambili ebonakalayo nabo, sakhulisa ukuvakasha, amasheya, kanye nemikhombandlela yokuthengisa efanelekayo yokuthengisa izinombolo eziphindwe kabili ngonyaka. Isabelomali asikaze sishintshe, kepha izimfuno zabonakala zikhula size senze ama-infographics, amavidiyo achazayo futhi sibakhele neziza eziningi. Bazungeza ngabasebenzi, futhi ngamunye wayefuna ukushintsha izinkomba, ngakho-ke umfutho waba nomthelela.
Akunandaba, bekuvame ukujabulisa ukubona okuqukethwe esibenzele kona ukuthi bathathe isikrini esikhungweni sezimboni bazi ukuthi inkampani ichitha ingxenye encane yalokho abadlali abakhulu abakulo mkhakha. Sasiyikho futhi siyaziqhenya ngokuthi singakwazi kanjani ukuhambisa inaliti ngezinsizakusebenza ezincane. Mhlawumbe amandla ethu abaluleke kakhulu.
Kwathi ngolunye usuku kwenzeka.
Sawubona, sisebenzisa ithani lemali nawe futhi sikhahlela izinqe zethu ngu _________.
Lokho kufana nokuthi ngizibuza ukuthi kungani uMike Tyson ekwazile ukungikhipha emzuliswaneni wokuqala.
The ithani lemali Isabelomali sabo besingaphansi kuka- $ 0.005 nge $ 1 ngayinye ekumaketheni inkampani abayikhombisile kusuka kule infographic ebichitha. Ngiyanqikaza ukubiza inkampani esincintisana nabo, kodwa benze njalo ngizokwenza kanjalo. Umuntu abancintisana naye ubenemicimbi yesifunda neyezwe lonke, imikhankaso yokusesha ekhokhelwayo, umtapo wolwazi wokuqukethwe kwe-premium, ishaneli lamavidiyo kuzo zonke izihloko, nokuchithwa okukhulu kokukhangisa kuzo zonke izingosi zezimboni. Umhlathi wami wehla; sigoqe ukuzibandakanya sabe sesiphuma.
Njengoba sisebenzisela bobabili abahlinzeki be-SaaS bebhizinisi abavuthiwe kanye nokuqala okuncane, kuyathakazelisa kakhulu ukubona ukuthi imfucuza ikuphi, lapho umthelela ukhona, nokuthi izabelomali zikuphi. Ngenkathi le infographic ihlanganisa zonke izindleko zokukhangisa nezentengiso, kufanele ilolonge ukuthi kunomthelela kangakanani ukutshalwa kwezimali kwezentengiso ezinkulu nokuthengisa kunkampani ejwayelekile yobuchwepheshe bokumaketha.
Sebenzisa iphesenti elikhudlwana lemali engenayo yakho yonke futhi kusobala ukuthi uzozuza ngamaphesenti amakhulu okukhula. Akudingeki usebenzise imali eningi, kepha kufanele umbe ujule.
Tags: isabelomali sokumaketha semfundo yomphakathi waseMelikaisabelomali sokumaketha i-apulaisabelomali sokumaketha kwezobuchwephesheisabelomali sokumaketha soxhumana naye njaloisabelomali sokumaketha se-googleIsabelomali sokumaketha esikhulu sase-canyonIsabelomali sokumaketha se-idexxIsabelomali sokumaketha se-IntelIsabelomali sokumaketha esihlanganisiweIManhattan ihlobanisa isabelomali sokumakethaisabelomali sokumaketha isoftware ye-marinisabelomali sokumakethaisabelomali sokumakethaisabelomali sokumaketha se-microsoftisabelomali sokuthengisa se-oracleIsabelomali sokumaketha se-rackspaceisabelomali sokuthengisaisabelomali sokuthengisaintukuthelo yesabelomali sokuthengisaisabelomali sokumaketha se-twitters
IBigCommerce Yethula Ipulatifomu ye-Enterprise Ecommerce
Ungalwakha Futhi Ulukhulise Uhlu Lakho Lwe-imeyili
Sep 4, 2015 ku-10: 37 AM
Ngangimgona noVital… futhi ngiyabonga ngokwabelana noDoug. Ngiyethemba impela ukuthi bazokwenza isibuyekezo sango-2015. Kumele ngikholelwe ukuthi imali esetshenzisiwe yi-LinkedIn inyuke kakhulu ngokuya ngokubheka komuntu futhi ngingathanda ukubona ezinye izengezo ezingxenyeni zemakethe ezinjengokumaketha kokuqukethwe nevidiyo.
Sep 26, 2015 ku-11: 56 AM
Ukuhlaziywa Okuhle. Njengomhlinzeki we-SaaS osafufusa le Infographic izophrintwa futhi igcinwe odongeni ukubona nsuku zonke. 🙂
I-Oct 13, i-2015 ku-4: i-33 PM
I-athikili enhle kakhulu ene-infographic ebaluleke kakhulu.
Feb 20, 2017 ngo-5: 35 AM
I-athikili ehlakaniphile! Futhi bekuwumqondo omuhle ukuthi lokhu kuvezwe yi-infographic njengoba nakanjani abantu bebengafuni ukufunda izihloko ezinenombolo namaphesenti ngamagama! Ngokuhambisana nalokho, ngisanda kuzwa izinto ezinhle ngeLirik (enikezela ngezinsizakalo ze-SaaS zeSalesforce neNetSuite).